Izindaba - Isembozo Esisha Se-Multi-Surface Sivikela I-COVID-19
Isifo seCoronavirus 2019 (Covid-19) yigciwane lenoveli elatholakala ukuthi liyimbangela yokuqhamuka kwesifo sokuphefumula esikhulu futhi esashesha ngokushesha, kufaka phakathi i-pneumonia engahle ibulale. Lesi sifo saqala eWuhan, eChina ngoJanuwari 2020, futhi sakhula saba yinkinga yobhadane kanye nomhlaba wonke. Leli gciwane laqokwa okwesikhashana i-2019-nCoV futhi kamuva lanikezwa igama elisemthethweni elithi SARS-CoV-2.
I-SARS-CoV-2 igciwane elibucayi kodwa elithathelwanayo elisakazeka kakhulu lisuke kumuntu liye komunye. Sibuye sisabalale lapho umuntu onegciwane ekhwehlela noma ethimula, bese amaconsi ewela ezindaweni noma ezintweni ezithile. Umuntu othinta ingaphezulu bese ethinta amakhala, umlomo noma amehlo angalicosha leli gciwane.
Yize amagciwane engakhuli ezindaweni ezingaphili, ucwaningo lwakamuva lukhombisa ukuthi i-coronavirus ingahlala isebenze noma itheleleke ngensimbi, ingilazi, ukhuni, izindwangu kanye nezinto zepulasitiki amahora amaningana kuya ezinsukwini, kungakhathalekile ukuthi indawo ibukeka ingcolile noma ihlanzekile. Leli gciwane kulula ukuliqeda, kusetshenziswa izibulali magciwane ezilula njenge-ethanol (62-71%), i-hydrogen peroxide (0.5%) noma i-sodium hypochlorite (0.1%) ngokuphula imvilophu ebucayi ezungeze igciwane elincane. Kodwa-ke, akunakwenzeka ukuhlanza izindawo ngaso sonke isikhathi, futhi ukubulala amagciwane akuqinisekisi ukuthi indawo ngeke iphinde ingcoliswe futhi.
Inhloso yethu yocwaningo kwakuwukwakha indawo yokumboza ngamandla angaphansi kakhulu we-surface angakwazi ukuxosha i-spike glycoprotein efaka amahange, nokusebenzisa amakhemikhali asebenzayo ukwenza i-spike glycoprotein nama-nucleotide wegciwane angasebenzi. Senze i-NANOVA HYGIENE + ™ esezingeni eliphakeme, elwa namagciwane (anti-virus kanye ne-bactericidal), enciphisa ubungozi bokungcola kwamagciwane cishe kuzo zonke izindawo, kufaka phakathi insimbi, ingilazi, ukhuni, izindwangu kanye namapulasitiki ngomgomo wokuxosha amagciwane, ukunikela indawo engeyona induku yamagciwane nokuzihlanza ngokwakho izinsuku ezingama-90. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe buyasebenza futhi buqinisekisiwe uma buqhathaniswa ne-SARS-CoV-2, igciwane elibhekele i-COVID-19.
Ubuchwepheshe bethu busebenza endaweni yokuxhumana engaphezulu, okusho ukuthi ngokushesha nje lapho noma yimaphi amagciwane ehlangana nendawo eboshwe kuqala iqala ukucisha amagciwane. Yenziwe ngokuhlanganiswa kwama-nanoparticles esiliva (njenge-virocidal) kanye ne-non-migrration quantrany ammonium salt salt disinfectant (njenge-virostatic). Lokhu kusebenza ngempumelelo enkulu ekusebenzeni kwegciwane le-RNA eligutshuziwe kanye ne-bacterial DNA genome. Ukumbozwa kuhlolwe nge-coronavirus yomuntu (229E) (uhlobo lwe-Alpha coronavirus) eNelson Lab, e-USA; i-coronavirus yezinkomo (S379) (Uhlobo lwe-Beta coronavirus 1) olusuka e-Eurofin, e-Italy; kanye ne-MS2, igciwane le-RNA, igciwane lesivumelwano esikhundleni segciwane le-Picoma njenge-Poliovirus kanye ne-norovirus yabantu evela ebhodini eligunyaziwe le-NABL e-India. Imikhiqizo ikhombisa ukusebenza> 99% ngenkathi ihlolwe ngokwamazinga womhlaba wonke i-ISO, JIS, EN ne-AATCC (Umdwebo 1). Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo uhlolwe ukuthi awunabo yini ubuthi ngokwe-standard standard ye-Nontoxic Acute Dermal Skin Irritation Report (i-OECD 404) evela esikhungweni sokucwaninga se-APT esivunyelwe i-FDA, ePune, India, nakuwo wonke umhlaba we-leaching test wokuxhumana kokudla i-US I-FDA 175.300 evela eCFTRI, Mysore, India. Le miphumela yokuhlolwa iqinisekisa ukuthi umkhiqizo awunabuthi futhi uphephile ukuwusebenzisa.
Sisebenzise ilungelo lobunikazi lobu buchwepheshe ngenombolo yesicelo. Imodeli yokusebenza ye-NANOVA HYGIENE + technology imi kanjena:
1. Njengoba ama-microbes ahlangana nokumbozwa, ama-AgNP avimbela ukuphindaphindeka kwamagciwane ama-nucleotide, okuyindlela eyinhloko yokuba namandla kwawo. Ibopha amaqembu abanikeli be-electron njenge-sulphur, i-oxygen ne-nitrogen evame ukutholakala kuma-enzyme ngaphakathi kwegciwane. Lokhu kubangela ukuthi ama-enzyme akhishwe, ngaleyo ndlela akhubaze umthombo wamandla weseli ngempumelelo. Igciwane lizofa ngokushesha.
2. Isiliva le-cationic (Ag +) noma ama-QUATs asebenza ukwenza i-coronavirus yomuntu ingasebenzi ngokusebenzisana ne-surface (spike) protein yayo, i-S, ngokusekelwe ekukhokhisweni kwayo njengokuthi isebenza ku-HIV, ama-virus e-hepatitis, njll. (Umfanekiso 2).
Ubuchwepheshe buzuze impumelelo nezincomo ezivela ezinhlanganweni eziningi ezikhethiwe nososayensi. I-NANOVA HYGIENE + ikhombisa ukukhubazeka okuphelele kwamagciwane ahlukahlukene we-pathogenic, futhi ngesisekelo semibiko yesayensi etholakalayo, sinombono wokuthi ifomula yamanje kufanele isebenze ngokulwa nama-virus amaningi.
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe ezindaweni ezahlukahlukene kungamisa ukusabalala kwesibili kusuka ezindaweni ezahlukahlukene kuye kumaseli aphilayo ngokuthinta. Ukuzivikela kwe-nano okuzivikela kusebenza kuzo zonke izindawo ezinjengendwangu (izifihla-buso, amagilavu, amajazi odokotela, amakhethini, amashidi okulala), insimbi (amalifti, izibambo zeminyango, izikhulu, izitimela, izithuthi zomphakathi), izinkuni (ifenisha, phansi, amapaneli wokwahlukanisa) , ukhonkolo (izibhedlela, imitholampilo namawadi okuhlukaniswa nabantu), oplastikhi (amaswishi, izinto zasekhishini nezinto zasendlini) futhi kungasindisa izimpilo eziningi.
Isikhathi Iposi: Jan-29-2021